Yonsei University - Baro dibadda ee South Korea
City : Seuol
gaabinta : Yu
aasaasay : 1885
Ardayda (qiyaastii.) : 39000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Yonsei
Qor at University Yonsei
University Yonsei albaabkii furay in waxbarashada sare casriga ah in ka badan hal qarni ka hor. Waxay leedahay tan iyo markaas soo baxay sidii jaamacadda gaarka loo leeyahay ugu sareysa ee qaranka oo ka mid ah jaamacadaha ugu caansan dunida ee ay ka dhigeysa. Dhisidda on our taariikhda iyo dhaqanka, Yonsei firfircoon eryan doonaa mustaqbal cusub. Raadinta si aad u hesho meesheenna in spectrum ee guurka civilizational, Yonsei horseedi doonaa soo socda 100 sano oo waxaad ku qortaa taariikhda cusub.
University Yonsei ayaa hadda galaya adduunka ka mid ah fursadaha unimagined. In dabayl cirwareen ah ee transformations weyn, horumarinta degdegga ah ee isgaarsiinta iyo farsamooyinka sayniska gaar ahaan waxaa eedeega deegaanka cilmiga jaamacadaha iyo cilmi baarista oo gebi ahaanba. dalabka waxaa kici doono, waayo model ah waxbarashada cusub oo taageera qarni la filayaa in ay ku nool yihiin in ay 100 sano jir ah. Sayidka, University Yonsei waxaa dib u habaynta ay cilmi, nidaamka waxbarashada, iyo taageerida maamulka si ay u horseedi habka cilmi-baarista iyo waxbarashada hore u-fikirka bulshada a beddelo.
Fila siinaya aqoon takhasus sare leh, sida ay ahayd dhaqanka ee bulshada warshadaha ee la soo dhaafay, hadda noqonayaa dhaawac qotto dheer ardayda ku nool doonaa si ay u arkaan meel leexashadii qarnigii cusub. Xitaa da'da ah meesha sirdoonka macmal ah dhaafa awooda garashada aadanaha, Yonsei jawaabi doono wicidda in la kobciyo xirfadaha hal abuur leh oo keliya baa la samayn karaa by aadanaha. Yonsei waxaa horumarinta barnaamijyada kala duwan si loo kordhiyo hal-abuurka ee ah "bulshada network." In xilligii casri ah, isdhexgalka joogta ah meelaha kala duwan ee aqoonta iyo khibrad la dhiso shabakado in ay wadada u noocyada cusub ee aqoonta iyo aragtida.
Tusaale ahaan, physicists horumarinta xirfadaha aragti iyo farsamo ee nanotechnology waxaa jabiyay caqabadaha u dhexeeya sayniska saafi ah iyo technology codsatay. Iskaashi u dhexeeya aadamaha iyo cilmiga dabiiciga ah ayaa keenay tabo cusub ku jiray oo hore loo qiyaasi karo. Sidaa darteed waa muhiim in waaxaha farqiga qaybsanaanteena iyo dhiiri wada hadal u dhexeeya cilmi of beeraha kale. Si taas loo gaaro, Waxaan aaminsanahay in muhiimadda ay leedahay fududeynta "extelligence,"Horumar ah ee sirdoonka iyada oo u xigay fikradaha dhalaalaya haddii kale waxay qalaad ku. -Abuurka ma aha kaliya awood u leh inay sameeyaan taaban karo isku dhejisa, laakiin waa awood u leh inay qaataan wixii hor iyo ka dhigi wax cusub la isticmaalayo shabakadaha garashada.
Mustaqbalka, u damqasho iyo qaybsiga noqon doonaa sida ay muhiim u fikirka hal abuur leh. Yonsei eryi doonaa dadaalka si wax looga qabto ah "bulshada dadkana qiimeeya" sida ay madaxda kor ku dhaqma wadaago. Waayo, bulshada this ee mustaqbalka, raacdada faa'iidadoodu shakhsi lagu beddeli doonaa by ixtiraam labada dhinac iyo in la wadaago of farxadaha iyo murug, dadka kale; bulshada iska ka wereegi doonaa qaab ay "badbaadada ah fittest" maskax iyo xaggeeda fiiri is-qowlka, iyo shaqsiyaddeenna in Xuriyadda celin doonaa. The aasaasayaasha Yonsei beeray qiimaha socda meelo ka baxsan si fudud la wadaago khayraadka iyo awoodaha wax la wadaaga hogaanka. Challenge iyo Abuuridda, isgaarsiinta iyo damqasho, qaybsiga iyo tixgelin, dhibkeedii iyo ixtiraam. Kuwani waa qiyam ah in aan qaado nala sida hoggaamiyeyaasha mustaqbalka, iyo ku dhaqmaan doonaa oo tiiriyo sida Yonseians. wada biir la Yonsei ee keentay jidka loo maro mustaqbalka.
College of Business iyo Dhaqaalaha
College of Life Science iyo bayotechnoolajiyadda
College of Sciences Bulshada
College of Ilkaha
Open Major, University College
Underwood International College(UD Freshman, ASD, MARKAA, iSSD, siga)
College of Medicine(Freshman)
College of Ilkaha(Freshman)
College of Farmashiyaha
School of Technology Integrated, College of Engineering
Barnaamijka Global - Pre-Major Program
Graduate School of Studies International
Graduate School of Information
Graduate School of Arts Isgaarsiinta iyo
Graduate School of Journalism iyo Mass Communication
Graduate School of Human Sciences Environmental
Graduate School of Government iyo Ganacsiga
Graduate School of Health iyo Deegaanka
Ma rabtaa wada hadlaan University Yonsei ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Yonsei on Map
dib u eegista University Yonsei
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Yonsei.
jaamacadaha kale ee South Korea
Hankuk University of Studies Dibadda Seoul
dalalka Baro soon
Baro mustaqbalkiisa soon
Codso hadda xarumo soon